၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင် WINDOWS တွင်အဆင့်မြင့် CPU၊ DISK နှင့် MEMORY USAGE ကိုပြုပြင်ပါ - WINDOWS 10
System System တုန့်ပြန်မှုမရှိတာကိုသင်သတိပြုမိပါသလား CPU အမြင့်နှင့်မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှု နောက်မှ Windows 10 20H2 update ကို ? ဖွင့်ထားသောဖိုင်များသို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲများစသည်ဖြင့်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါက ၀ င်းဒိုးစနစ်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ ၀ င်းဒိုးပရိုဂရမ်များသို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းများသည်တုန့်ပြန်ရန်သို့မဟုတ်ဖွင့်ရန်အချိန်များစွာလိုပါသလား။ ဖွင့်တဲ့အခါ Task manager က 99% ဒါမှမဟုတ် System Resource (CPU, RAM, Disk) အသုံးပြုမှုကိုဖော်ပြပေးတယ်။ ဤတွင်ဤစာမူ၌ပြင်ဆင်ရန်အားကောင်းသောဖြေရှင်းနည်းများအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည် Windows 10 တွင် CPU မြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်း , 8.1 နှင့် Win7။
google chrome မှာအသံဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲ
မာတိကာ ပြ ၁ Windows 10 တွင် CPU နှင့် Disk အသုံးပြုမှု ၁၀၀ ကို fix ၁.၁ Virus / Malware ကူးစက်ခြင်းအတွက် System Scan ကိုအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ပါ ၁.၂ မြင့်မားသော System Resource Usage ကိုပြုပြင်ရန် Windows Registry ကိုပြုပြင်ပါ ၁.၃ မလိုအပ်သော Startup Programs များကို Disable လုပ်ပါ ၁.၄ မလိုလားအပ်သောပရိုဂရမ်များကိုဖယ်ထုတ်ပါ ၁.၅ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Windows 10 ကိုချိန်ညှိပါ ၁.၆ Superfetch, BITS နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ ၁.၇ Defragment Hard Disk Drives များ ၁.၈ တပ်ဆင်ထားသည့်ယာဉ်မောင်းများကိုအဆင့်မြှင့်ထားကြောင်းသေချာပါစေ ၁.၉ ကွဲပြားသောပြProbleနာများကိုဖြေရှင်းရန် SFC, CHKDSK နှင့် DISM command ကို run ပါ
အသုံးများဆုံးအချက်များစနစ်မြင့်မားသောအရင်းအမြစ် (CPU, RAM, DISK) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော registry၊ သဟဇာတမဖြစ်သည့် driver များ၊ များစွာသောနောက်ခံပရိုဂရမ်များ၊ ဗိုင်းရပ်စ် / Spyware ကူးစက်ခြင်းများဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်လတ်တလော windows များ 10 အဆင့်မြှင့်တင်ပါ။ System files ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ် Get Corrupt လျှင်ဤအချက်သည်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည် Windows 10 တွင် CPU မြင့်မားစွာအသုံးပြုခြင်း ။
Windows 10 တွင် CPU နှင့် Disk အသုံးပြုမှု ၁၀၀ ကို fix
အကယ်၍ သင်သည် CPU / memory သို့မဟုတ် Disk အသုံးပြုမှုမြင့်မားခြင်းကြောင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြissuesနာများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရပါက။ ဤနေရာ၌စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျမှုနှင့်နှေးကွေးသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော Windows 10 ကွန်ပျူတာကို CPU အသုံးပြုမှုအလွန်များပြားခြင်းနှင့်မလိုအပ်သော System Resource (RAM / Disk CPU) အသုံးပြုမှုကိုလျှော့ချရန် Bellow ဖြေရှင်းချက်များကိုအသုံးပြုပါ။
Virus / Malware ကူးစက်ခြင်းအတွက် System Scan ကိုအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်ပါ
Apply Bellow ဖြေရှင်းချက်များမပြုလုပ်မီ Virus နှင့် Spyware များအနေဖြင့်ပြtheနာကိုဖြစ်စေသောမည်သည့်ဗိုင်းရပ်စ် / malware မဆိုသေချာစေရန် A ပြည့် A၀ Scan ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ အကြောင်းမှာ Window ကွန်ပျူတာများသည် System Running နှေးစေသည့်နှေးကွေးစေသော malware များနှင့်ကူးစက်ခံရလျှင်အချိန်အများစုသည်စဖွင့်ချိန်တွင်တုန့်ပြန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် Spyware ပရိုဂရမ်များသည် Background CPU ကို သုံး၍ High CPU Disk နှင့် Memory Usage ကိုဖြစ်စေသောအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးပြုသည်။
ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကောင်းမွန်တဲ့ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံမှုများထည့်သွင်းပြီးဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်စနစ်အပြည့်စစ်ဆေးပါ။ junk, Cache, Temp files, System error, Memory dump ဖိုင်များကိုရှင်းလင်းရန် Ccleaner ကဲ့သို့သော Third-party System Optimizer ကိုလည်းထည့်သွင်းပါ။ ထို့အပြင်စနစ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး High System Resource အသုံးပြုမှုကိုပြုပြင်သည့် Broken registry entries များကိုလည်းပြင်ဆင်ပါ။
မြင့်မားသော System Resource Usage ကိုပြုပြင်ရန် Windows Registry ကိုပြုပြင်ပါ
ဤသည်သည်ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသောထိရောက်မှုအရှိဆုံးနှင့်အအထောက်အကူဆုံးသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပြီး ၁၀၀% မှတ်ဉာဏ်အသုံးပြုမှု Memory leak နှင့်ပတ်သက်သောပြallနာများအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်။ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ Windows registry ကိုညှိနှိုင်းသွားမှာပါ backup registry ဒေတာဘေ့စ် မည်သည့်ပြုပြင်မွမ်းမံအောင်မီ။
ပထမဆုံး Windows + R ကို နှိပ်၍ Windows Registry Editor ကိုဖွင့်ပါ ရက်ဒ် နှင့် Enter key ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင်ဘယ်ဖက် sidebar မှာအောက်ပါ key ကိုသွားပါ။
မြင့်မားသော RAM အသုံးပြုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောပြallနာများကိုဖြေရှင်းရန်ပထမနှင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သင်၏ Windows PC ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှေးကွေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုမသိပါကဤနည်းလမ်းသည်သင့်အားများစွာကူညီလိမ့်မည်။ မြင့်မားသော RAM ကိုအသုံးပြုမှုကိုပြုပြင်ရန်အောက်ပါအဆင့်များအတိုင်းသာလုပ်ဆောင်ပါ။
ပထမ ဦး စွာ Memory management key ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက်အလယ်စာမျက်နှာတွင် Dword key ကိုရှာပါ ClearPageFileAtShutdown ။ ၎င်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ ၎င်း၏တန်ဖိုးကို ၁ သို့ပြောင်းပြီးပြောင်းလဲမှုများကိုသိမ်းဆည်းရန် ok ကိုနှိပ်ပါ။
Memory management ကိုနှိပ်ပြီးအဓိက content panel တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာတွေ့ရလိမ့်မည်။ ClearPageFileAtShutdown ကိုရှာပြီး၎င်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ။ ပြီးရင်တန်ဖိုးကို 1 ပြောင်းပြီး ok ကိုနှိပ်ပါ။ Next system Restart တွင်ပြောင်းလဲမှုသည်အကျိုးသက်ရောက်ပါလိမ့်မည်။
မလိုအပ်သော Startup Programs များကို Disable လုပ်ပါ
သင်၏ Windows PC ကိုစဖွင့်တိုင်းပရိုဂရမ်အချို့သည်သင်မသိဘဲမိမိဘာသာအလိုအလျောက်စတင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ ဂျာဗားအဆင့်မြှင့်တင်သူ၊ ဒေါင်းလုပ်စသည်တို့စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ များစွာသော startup applications များသည်များသောအားဖြင့်မလိုအပ်သော system အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့် PC စွမ်းဆောင်ရည်ကိုနှေးကွေးစေနိုင်သည်။ ဒီမလိုအပ်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေကို startup မှာ Disable လုပ်ခြင်းကသင့်ကို RAM / Disk နဲ့ CPU အသုံးပြုမှုများစွာသိမ်းဆည်းဖို့သေချာပါတယ်။
Startup အစီအစဉ်များကို Disable လုပ်ဖို့
စာနယ်ဇင်းအားဖြင့် Taskmanager ကိုဖွင့် Ctrl + Alt + Del ကီးဘုတ်ပေါ်ကသော့။
ထို့နောက် Move To startup tab သည် PC startup နှင့်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သောပရိုဂရမ်များ၏စာရင်းကိုပြလိမ့်မည်။
startup တွင် run ရန်မလိုသည့် application များပေါ်တွင် right-click နှိပ်၍“ Disable” ကိုရွေးပါ။
သင်တတ်နိုင်သလောက်မလိုလားအပ်သောကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုများများဖယ်ထုတ်ပါ။ သငျသညျအခြို့သော software ကိုပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ခြင်းရှိမရှိအရေးမထားဘူး။ သို့သော် အကယ်၍ ၎င်းသည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပါက၎င်းသည်အာကာသကို သုံး၍ စနစ်အရင်းအမြစ်များကိုလောင်လိမ့်မည်။
rpc ဆာဗာကို 0x800706ba မရနိုင်ပါ
Windows + R key ကိုနှိပ်ပါ appwiz.cpl နှင့် Enter key ကိုနှိပ်ပါ။
၎င်းသည် Programs နှင့် Features ၀ င်းဒိုးကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ သင်၏ system တွင်ထည့်သွင်းထားသောပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုကြည့်ပါ။ မလိုချင်သောသူများကို uninstall လုပ်ရန်ပရိုဂရမ်ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်ပြီး Uninstall option ကိုရွေးချယ်ပါ။
အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Windows 10 ကိုချိန်ညှိပါ
အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် Windows 10 ကို Adjust လုပ်ပါ။ နာမည်ကအကြံပြုထားသည့်အတိုင်း၊ ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးရှိမှတ်ဉာဏ်၊ CPU နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သက်ဆိုင်သောပြissuesနာများကိုများစွာပြုပြင်ရာတွင် Windows system တွင် setting option တစ်ခုဖြစ်သည်။
အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် windows များကို Adjust လုပ်ရန်:
Start menu Search ကိုနှိပ်ပါ။ performance ကိုရိုက်ပါ။ windows ၏အသွင်အပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို Adjust လုပ်ပါ။
ထို့နောက် Visual Effects အောက်ရှိ Performance options ၀ င်းဒိုးတွင်၊ radio Performance Adjust for Best Performance ကိုရွေးချယ်ပါ။
အပြောင်းအလဲများကိုအကျိုးသက်ရောက်စေရန် Apply and ok ကိုနှိပ်ပါ။
Superfetch, BITS နှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ပါ
သင်၏ CPU အရင်းအမြစ်များကိုစားသုံးရန်အဓိကတရားခံဖြစ်သော ၀ င်းဒိုး ၁၀ ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ရှိသည်။ Superfetch သည် Windows 10 system service ဖြစ်ပြီး၎င်းကို RAM မှရရှိသောအချက်အလက်အများဆုံးရရှိရန်သေချာစေသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပိတ်ထားပါက CPU အသုံးပြုမှုကျဆင်းလာသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည် ။ BITS, Search index, Windows update စသည်ကဲ့သို့သောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ထို ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပိတ်ခြင်းသည် System ရင်းမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်များစွာခြားနားသည်။
ဤဝန်ဆောင်မှုများကို disable လုပ်ရန်
Windows + R key ကိုနှိပ်ပါ ဝန်ဆောင်မှုများ နှင့် Enter key ကိုနှိပ်ပါ။
ယခုအောက်သို့ဆင်းပြီး Sysmain (Superfetch) အမည်ရှိဝန်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေပါ၊ ၎င်းကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ
ဂုဏ်သတ္တိများတွင်၊ ၀ င်းဒိုးသည် startup အမျိုးအစားကိုပြောင်းလဲပြီး၎င်းကိုဖွင့်လျှင်ဝန်ဆောင်မှုကိုရပ်ပါ။
အပြောင်းအလဲများသိမ်းဆည်းနိုင်ရန်အတွက် apply ကိုနှိပ်ပါ။
BITS, Search index နှင့် Windows Updates ကဲ့သို့သောအခြား ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အလားတူအဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။ ပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှု ၀ င်းဒိုးကိုပြန်ပိတ်ပြီး ၀ င်းဒိုးပြန်ဖွင့်ပါ၊ နောက်တစ်ခေါက်တွင်သင်သည်အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုကွာခြားမှုကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
Defragment Hard Disk Drives များ
Defragmenting သည်သင်၏ system စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင်၏ Windows PC တွင်မှတ်ဉာဏ်ယိုယွင်းမှု၊ မြင့်မားသော CPU၊ disk အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အမှန်တကယ်ကူညီသည်။
မှတ်စု: သင် SSD Drive ကိုသုံးနေလျှင်ဤအဆင့်ကိုကျော်လိုက်ပါ။
Defragment Disk Drive ကိုဖွင့်ဖို့ Windows + R key ကိုနှိပ်ပြီး၊ ရိုက်ပါ dfrgui နှင့် Enter key ကိုနှိပ်ပါ။ ၀ င်းဒိုးအသစ်ထဲ၌သင် defragment လုပ်ချင်သော hard drives ကိုနှိပ်ပါ (၀ င်းဒိုးထည့်ထားသည့် drive ကိုပိုမိုနှစ်သက်သည်)“ Optimize” ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် defragment လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးဆုံးရန် screen ပေါ်ရှိညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
သဟဇာတမဖြစ်သည့် driver များသည် memory ယိုစိမ့်မှုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော system ပြresultနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း၊ ထို့ကြောင့်ယာဉ်မောင်းပြissuesနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်သင်၏စနစ်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးပေါ် Device drivers များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်အရေးကြီးသည်။
Windows Start menu ပေါ် Right-click နှိပ်၍ Device Manager ကို ရွေးချယ်၍ Driver ဖွင့်ထားသော Device Manager ကိုစစ်ဆေး။ အသစ်ပြောင်းရန်။ ဤနေရာတွင်သင် drivers အားလုံးကို update လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် update လုပ်ဖို့လိုအပ်သည့်အရေးကြီးဆုံး driver များမှာ
Motherboard Chipset ကားမောင်းသူ
Motherboard ကွန်ယက် / LAN ယာဉ်မောင်းများ
ယခုသင်ချဲ့ထွင်ပြီးသင် update လုပ်လိုသည့် Driver (Ex graphic driver) ကို right-click နှိပ်၍ update driver ကိုရွေးချယ်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြီးထို မှနေ၍ နောက်ဆုံးပေါ်ယာဉ်မောင်းများကိုရနိုင်သည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကစစ်ဆေးပါ Windows 10 တွင် Drivers များကိုမည်သို့ Install လုပ်ရမည်နည်း၊
ကွဲပြားသောပြProbleနာများကိုဖြေရှင်းရန် SFC, CHKDSK နှင့် DISM command ကို run ပါ
အရင်ဆုံးဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်း system files တွေပျောက်နေတယ်ဆိုရင် application တွေကို install / uninstall လုပ်တဲ့အခါဒါမှမဟုတ် Windows upgrade လုပ်တဲ့အခါပျက်စီးသွားပါ။ ဒါကမတူညီတဲ့ windows ပြwindowsနာတွေနဲ့ buggy system performance ကိုကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် System ကိုဖိုင်စစ်ဆေး Utility ကို run ပါ ပေါ်သောအထူးဖိုင်တွဲမှပျောက်ဆုံးနေသော System files များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးပြီးပြန်ထားပါ % WinDir% System32 dllcache ။
SFC Scan ရလဒ်များသည်အချို့ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော system files များကိုတွေ့ရှိပါက၎င်းတို့ကိုမပြုပြင်နိုင်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် run ဖို့လိုအပ်ပါတယ် DISM command ၎င်းသည် System ပုံရိပ်ကိုပြုပြင်ပြီး SFC အား ၄ င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်စေသည်။
တဖန် ၁၀၀% Disk သုံးစွဲမှုပြproblemနာကိုသင်ရနေလျှင်။ ထိုအခါပြDriveနာဖြစ်စေသော Disk Drive အမှားများသို့မဟုတ် Bed ကဏ္sectorsများရှိနိုင်သည်။ ပြီးတော့ CHKDSK command ကို run Extra parameters များကို အသုံးပြု၍ Disk Drive အမှားများကိုစစ်ဆေးပြီးဖြေရှင်းပါ။
ဤအဆင့်အားလုံး Apply ပြီးနောက် windows ရိုးရှင်းစွာပြန်လည်စတင်ပါ။ နောက်ထပ်ပြန်လည်စတင်မှုတွင် System Resource အသုံးပြုမှုတွင်ကြီးမားသောခြားနားချက်ကိုသင်သတိပြုမိသည်။
windows 10 edge icon ပျောက်နေသည်
ဖြေရှင်းချက်။ ။ Windows 10 / 8.1 /7တွင် Google Chrome မြင့်မားသော CPU အသုံးပြုမှု !!!
System နှင့် Compressed Memory ကိုဘယ်လိုပြုပြင်မလဲ။ windows 10 မှာမြင့်မားတဲ့ disk အသုံးပြုမှု
Windows 10, 8.1 and7ရှိ Device Drivers များအတွက် A မှ Z လမ်းညွှန်
Chrome browser မှာအသံမရှိပါ
99 ကို install လုပ်ခြင်းမှာမှီဝဲ Windows 10 ကို upgrade လက်ထောက်
windows SD ကဒ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါ